Puntland oo howl-gelisay guddi qiimaynaya dadkii ku hanti beelay duufaantii dhowaan (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 25, 2013 4:14 b 0
Garoowe, November 25, 2013 – Wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga ee Puntland, ayaa manata shaacisay in gargaarkii kala duwanaa ee gurmadka ahaa la gaarsiiyey meelihii ay masiibada duufaanta ah ka dhacday horaantii bishaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdalaahi Axmed Jamaac (Ilkajiir) oo maanta saxaafada kula hadlay Garoowe ayaa sheegay in masiibadu ka dhacday inta u dhexeysa laasqoray ilaa Garacad, balse ubucda ugu daran ay ahayd saddex xagalka Dangoronyo, Eyl iyo Bender-bayla.
Mudane Ilkajiir ayaa xusay in gargaarka ugu badan ee dadka la gaarsiiyey ay keeneen shacabka Soomaalida iyo dalalka deriska ah, sidoo kale waxaa jira gurmad ay fidiyeen hay?adaha gargaarka Qaramada midoobey iyo hay?addo kale oo caalami ah oo iyana gaaray meelihii masiibadu ka dhacday.
?masiibada waa lagu kala darnaa meelaha ay ka dhacday, dadka waxaa wax loo gaarsiiyey meelba meesha ay ka darnayd.? Ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Ilkajiir oo ka hadlayey habka gurmadku u fulay.
Docda kale wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali yuusuf cali Xoosh ayaa isna sheegay in dadka si deg deg ah wax loola gaaray, isla markaasna ay weli socdaan gurmadyada la fidinayo, waxaa uu sheegay in gurmadkii caalamiga ah qaybtood ay ku jiraan bakhaaro kuwaas oo haatan dadka la gaarsiinayo.
Dowladda Puntland waxay dhistay guddi qiimayn ku samayn doona sida khasaaraha dhanka maalka ah uu dadka ugaaray, guddiga oo la yiraahdo guddiga wax gaarsiinta ayaa ka kooban 11 xubnood oo madax u yahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana ku jira culimo iyo gudoomiyaal degmo.
?dadkii xooluhu dhaafeen ayey qiimayn ku samayn doonaan, dadka la rabo in xoolaha loo iibsho dadka soo xaqiijinaya waxa u haray iyo waxay horay u haysteen waa guddiga.? Ayuu yiri mudane Xoosh wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha.
Guddiga ayaa qiimayntiisa wadda waxaana dhowaan la arruurinayaa dadkii wax gaareen sida uu sheegay wasiir Xoosh ?Deegannadii wax ka dheceen oo dhan dad baa laga soo arruurinayaa, dadkaas waxaa saddex maalmood lagu haynayaa Dangoronyo, waxay sheegi doonaan sida wax u dheceen iyo xaqiiqda dhabta ah.?
Boqolaal ruux ayaa ku dhintay duufaanta dhacday, sidoo kale tobbanaan kun oo qoys ayaa ku guryo iyo hanti beelay duufaanta oo dhacday 11 november, meelaha ugu daran ee dadku wax ku noqdeen waa barriga Nugaal iyo qaybo ka mid ah Karkaar.